नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : पारसको अवस्था अझै ‘कम्प्लिकेटेड’, केही भन्न सकिने अवस्था छैन !
पारसको अवस्था अझै ‘कम्प्लिकेटेड’, केही भन्न सकिने अवस्था छैन !
बैंकक समतिभेद अस्पतालमा उपचाररत पूर्वयुवराज पारसको अवस्थामा झिनो सुधार आएको छ । तर, उनी अझैसम्म होसमा आएका छैनन् । अचेत अवस्थामै रहेका पारस अस्पतालको अतिसघन कक्ष (आइसियु)मा भेन्टिलेटर (कृत्रिम श्वास प्रदान गर्ने मेसिन)को सहायताले श्वासप्रश्वास गरिरहेको बताइएको छ । पारसको मुटुको भल्भ भने अस्पतालले खोलेको छ । यद्यपि, चिकित्सकले पारसको अवस्था अझै ‘कम्प्लिकेटेड’ नै रहेको जानकारी गराएका छन् । अस्पतालले पारसको मुटुको भल्भ शरीरबाहिरबाटै पम्पिङ गरेर खुलाएको छ । अस्पतालमा रहेका एनआरएन थाइल्यान्डका महासचिव सुनील खड्काका अनुसार पारसलाई बुधबार बेलुकी अस्पतालको मुख्य ब्रान्चमा सारिएको छ । ‘अहिलेसम्म केही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ खड्काले टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘चिकित्सकहरू उपचारविधिबारे छलफल गरिरहेका छन् ।’ बन्द भल्भ खुलाउनलाई स्टेन्ट राख्नु नपरेको तर यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने पनि खड्काले बताए । अचेत अवस्थामै भए पनि बुधबार आँखाको परेला चलाउन थालेकाले चिकित्सकले सुधारको संकेतका रूपमा लिएका छन् । अस्पतालले बुधबार दिउँसो पारसको टाउकाको सिटिस्क्यन गरेको थियो । सिटिस्क्यानको नतिजामा खासै
समस्या नदेखिएको चिकित्सकहरूले जनाएको खड्काले बताए । चिकित्सकहरूले पारसको मुटुको एमआरआई गर्नुपर्ने बताए पनि गर्न भने सकिरहेका छैनन् । एमआरआई गर्न मुटुको चाल स्थिर हुनुपर्ने भएकाले चिकित्सकहरू मुटुको स्थिर चालको पर्खाइमा रहेको खड्काले जानकारी दिए । ‘एमआराईपछि मात्र केही गर्न सकिन्छ भनेर चिकित्सकहरूले भनिरहेका छन्,’ उनले भने ।
Posted by www.Nepalmother.com at 11:09 PM